Nsọpụrụ ụbọchị: ọnụ ụzọ ámá abụọ nke Eluigwe
Paolo Tescione	Edere ya November 14, 2020 November 14, 2020
Ndidiọk. Nke a bụ ụzọ mbụ na-eduga n’elu-igwe. N'ebe ahụ ọ dịghị ihe na-enwe ntụpọ; naanị mkpụrụ obi dị ọcha, nke na-enweghị obi eziokwu, dịka nwa atụrụ na-enweghị ntụpọ, nwere ike iru Alaeze nke Ngọzi. Hope nwere olile anya isi n'ọnụ ụzọ a banye? N’oge gara aga ndụ ị na-adị mgbe niile dị ọcha? Otu oke nmehie mechiri uzo a, rue mgbe ebighi ebi ... Ikekwe ị maara na aka gị dị ọcha ... Lee ọgba aghara dịịrị gị!
Nchegharị. A na-akpọ nke a okpokoro nke nzọpụta mgbe mmiri ghara ịmị ọcha; ma obu uzo ozo di n’eluigwe maka ndi nmehie e meghariri, dika Augustine, maka Magdalene! Obu amara di uku nke Chineke, na, mgbe otutu nmehie gasiri, O gha anata gi n’elu igwe site na baptism ohuru a nke ihe mgbu na obara; ma olee nchegharị ị na-eme? Gịnị ka ị na-ata ahụhụ na mbelata nke mmehie gị? Enweghị penance ị gaghị azọpụta: chee echiche banyere ya ...
Mkpebi. Ihe gara aga na-akọcha gị site na mmehie na-aga n'ihu, oge a na-atụ gị ụjọ nke obere nchegharị gị: gịnị ka ị ga-edozi maka ọdịnihu? Yoú gaghị agbasi mbọ ike imeghe otu n’ime ụzọ abụọ ahụ? 1 ° Kwupụta ozugbo n sins mmehie niile ị debere n’akọ na uche gị ka e wee mee ka mkpụrụ obi gị dị ọcha. 2 Celsiọsi ka a ghara ikwe ka mmehie nke na-anwụ anwụ nke na-emeghị ihe ọjọọ ọzọ mee. 3 ° Na-eme ụfọdụ mmekpa ahụ, jiri ndidi na-ata ahụhụ, mee ihe ọma, ka ị ghara imechi ọnụ ụzọ nchegharị.
OMUME. - Gụọnụ Litany nke ndị nsọ, ma ọ bụ Pater atọ, ka ha wee mee ka ị banye n’eluigwe.
Nke gara aga Post Gara aga post:Tughariakwa ta taa ka okwukwe gi si zie ezi
Next Post → Post ozo:Kadịnal Bassetti si na nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ, na-anọgide na ọnọdụ dị egwu na COVID-19